नयाँ दम्पतीका लागि सुरक्षित र समयमै गर्भधारणका सूत्र - ।। Naya Kuro ।।
१ पुष २०७६, मंगलवार १६:५८ December 17, 2019 Naya KuroLeaveaComment on नयाँ दम्पतीका लागि सुरक्षित र समयमै गर्भधारणका सूत्र
२०७६, १ पुष मंगलवार : यो समय विवाहको हो । विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आउन थाल्छ कि खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? अर्थात दुलहीको गर्भ कहिशले बस्छ । हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशुलाई जन्मदिन चाहान्छन् ।
उनीहरूबीच यति महिनापछि, यति वर्षपछि मात्र सन्तान ट्राइ गर्ने भनेर योजना बनेको हुन्छ । यद्यपि गर्भवती हुन सोचेजस्तो सहज नहुनसक्छ । कसैलाई एउटै प्रयासमा गर्भ रहनसक्छ भने कसैलाई महिनौं प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने गर्भवती हुनका सेक्स गर्नु जति जरुरी छ उति नै कसरी र कहिले सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु आवश्यक छ । यी कुरालाई बेवास्ता गर्दा गर्भ नरहनसक्छ ।
धेरैजसो दम्पतीलाई गर्भ रहनका लागि कुन समय सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको पाइयो । सेक्सको समय सही भयो भने गर्भ बस्न कठिनाइ हुँदैन । गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन । आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ ।
जब पुरुष प्रजनन कोष ‘शुक्रकीट’ को महिलाको गर्भाशयमा अवस्थित अण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ तब मात्र कुनै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् । एउटा पेरेन्टिङ वेबसाइटले १ हजार १ सय ९४ दम्पतिमाथि अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन सन्तान चाहने दम्पतिमाथि गरिएको थियो। अध्ययनमा उनीहरूले गर्भधारणका लागि कति पटक सेक्स गरेका थिए भन्ने कुरा जान्न प्रयास गरिएको थियो।
उक्त अध्ययनका अनुसार आमाबाबु बन्न चाहने ती दम्पतीलाई औसतमा ७८ पटक सेक्स गर्दा सफलता हात लागेको थियो । यो क्रम औसत छ महिना चलेको थियो भने उनीहरूले एक महिनामा औसत १३ पटक सेक्स गरेका थिए ।
कतिपय मानिसमा के विश्वास छ भने गर्भधारण आसनमा पनि निर्भर हुन्छ । यसका लागि लगभग तीन चौथाइ मानिस मिसनरी पोजिसन (महिला तल र पुरुष माथि सुतेर गरिने यौन आसन) लाई उपयुक्त माने भने ३६ प्रतिशत जोडीले डगी स्टाइल पछ्याए । तर, विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावारी (डिम्ब निष्कासनको समय) थाहा पाउनु र डिम्ब निष्कासनको पाँच दिनअघि तथा त्यसै दिन सेक्स गर्दा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
डिम्ब निष्कासन के हो ?
डिम्ब निष्कासनले कुनै पनि महिलाको महिनावारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो त्यही प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत परिपक्व डिम्ब डिम्बाशयबाट निस्किएर फर्टिलाइज हुनका लागि तयार रहन्छ । डिम्ब निष्कासन प्रक्रियामा निस्किएको डिम्ब १२ देखि २४ घन्टासम्म फर्टिजाइज हुनसक्छ । सेक्सका क्रममा प्रवेश गरेको पुरुष शुक्रकीट महिला प्रजनन प्रणालीमा ५ दिनसम्म पनि रहन सक्छ ।
गर्भ रहने बढी सम्भावना तब रहन्छ जव डिम्ब निष्कासनका बेला शुक्रकीट फेलोपियन ट्युबमा पहिल्यैदेखि मौजुद रहेको हुन्छ । महिनावारी नियमित छ भने डिम्ब निष्कासन सामान्यतः अर्को महिनावारी सुरु हुनुभन्दा १४ दिन पहिल्यै हुन्छ । त्यसैगरी अधिकांश महिलामा डिम्ब निष्कासन महिनावारीको मध्यविन्दुभन्दा ४ दिन पहिले वा पछि हुनसक्छ ।
धेरै महिलामा महिनावारी चक्र ठीक २८ दिनमै हुँदैन । यस्तो छ भने महिलाहरूले महिनावारीको क्यालेन्डर बनाएर महिनावारी चक्रको लम्बाइ एवं मध्यविन्दुको अनुमान लगाउन सक्छन् । महिनावारी चक्रको क्यालेन्डरका अतिरिक्त डिम्ब निष्कासन समय अनुमान लगाउने अन्य तरिका पनि छन् । तीमध्ये एउटा भेजाइनल सेक्रेसनमा ध्यान दिनु पनि हो । डिम्ब निष्कासनअघि भेजाइनल सेक्रेसन सफा, ओसिलो एवं लचिलो हुन्छ ।
डिम्ब निष्कासनपछि तुरुन्तै सर्वाइकल म्युकस कम हुन्छ र यो बाक्लो, मधुरो तथा लगभग अदृश्यजस्तै हुनपुग्छ । शरीरको बेसिक तापक्रम (आरामको अवस्थामा शरीरको तापक्रम) मा ध्यान दिएर पनि डिम्ब निष्कासन समयको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक बिहान ओछ्यान छाड्नुअघि शरीरको तापक्रम जाँच्न सकिन्छ । तापक्रममा वृद्धि हुनुभन्दा २—३ दिनअघि कुनै पनि महिला गर्भवती हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जसरी बजारमा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छ त्यसरी नै ओभुलेसन (डिम्ब निष्कासन) डिटेक्सन टेस्ट किट पनि सहजै पाइन्छ । यसबाट डिम्ब निष्कासन भएनभएको थाहा पाउन सकिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार सामान्यभन्दा बढी तथा कम तौल भएका महलिाहरूमा ओभुलेसन डिसअर्डरको खतरा बढी हुन्छ । तसर्थ गर्भधारण गर्न चाहने महिलाले तौल नियन्त्रण राख्नु आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित कुराहरूमा गौर गर्दा मोटामोटी कुरा प्रस्ट हुन सकिन्छ तापनि असामान्य अवस्थामा गर्भधारणका लागि ठोस कदम चाल्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनु आवश्यक छ ।
छिटो गर्भधारणका सूत्र
बिवाहपछि सन्तानको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । जब बिहे गरिन्छ, सन्तानको लोभ लाग्न थाल्छ । अक्सर महिला आफ्नो काखमा बच्चा खेलाउन लालयित हुन्छन् । यसका लागि कतिले निश्चित अवधी तय गर्छन् । अर्थात आफुलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र बच्चा जन्माउने योजना बनाउँछन् । कतिपय भने हतारिन्छन् । यसो भनौं, कति दम्पती चाडै बच्चा जन्माउन चाहन्छन् ।
तर, चाहे अनुसार गर्भधारण हुन्छ त ? चाहेकै समयमा महिलाले गर्भधारण गर्नका लागि थुप्रै तालमले मिलाउनुपर्ने हुन्छ । गर्भवती हुने सही तरीका, सही समय, दिन, सुरुवाती लक्षण, सावधानी र अन्य केही उपायहरुबाट सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ कि महिला कहिले गर्भवती हुन्छन् । यदि तपाईं निकट भविष्यमा गर्भवती हुने योजना छ भने यी तलका कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ ।
केही महिलाहरुको मासिक धर्म ठीक समयमा हुन्छ भने केहीको अनियमित हुन्छ । अनियमित अर्थात् समयभन्दा छिटो वा समयभन्दा ढिलो । मासिक धर्म सही समयमा हुने महिलाहरुलाई गर्भधारणमा धेरै समस्या आउँदैन । जुन महिलाहरुको समयमा पिरियड आउँदैन उनीहरु गर्भवती हुन अलिकति जटिल हुन्छ । तर, यसको मतलब यो होइन कि उनीहरु गर्भवती हुन सक्दैनन् । बच्चा पैदा गर्ने तरीका र शारीरिक समागमको बारेमा खुलेर कुरा नगर्ने कारणले पनि धेरै महिलाहरु चाहेको समयमा गर्भवती हुन सक्दैनन् ।
गर्भवती हुनका लागि शारीरिक समागम आवश्यक हुन्छ । र, यो समागम सही समयमा हुनु महत्वपूर्ण छ । सही समयको जानकारी ‘ओभुलेसन टाइम’ बाट प्राप्त हुन्छ । यो गर्भधारण गर्ने उचित समय हो । अब गर्भधारण गर्ने सही तरीका के हो र ओभुलेसन पीरियड के हो भन्ने पनि जानौ ।
ओभुलेसन टाइम कसरी थाहा पाउने ? । गर्भधारण गर्नका लागि आभुलेसन पीरियड सबैभन्दा राम्रो समय हो । यो एक प्रकारले मासिक धर्मसँग जोडिएको समय नै हो । ओभुलेसन पीरियड कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जान्नुभन्दा अगाडि यो बुझ्नुस कि हरेक महिलाको आभुलेसनको समय फरक फरक हुन्छ र ओभुलेसनको समय थाहा पाउनका लागि महिलाको पीरियड्सको समय थाहा हुनुपर्छ ।
पीरियड सुरु हुनुभन्दा लगभग १२ देखि १४ दिन अगाडिको समयमा नै ओभुलेसन हुन्छ र यो पीरियड आउनुभन्दा ७ दिन अगाडिसम्म रहन सक्छ । ओभुलेसन नै त्यो समय हो जसमा यदि यौनसम्वन्ध राख्यो भने गर्भ बस्ने सम्भावना सतप्रतिशत हुन्छ । ओभुलेसनको समय (महिनावारीको १२ देखि १४ दिन अगाडि) र त्यसको पछिल्लो पाँच दिन महिलाको प्रजनन क्षमता अत्यधिक हुन्छ ।
मानौं कुनै महिलाको महिनावारी २५ मा आउँछ भने उसको ओभुलेसन समय ११ देखि १३ को बीचमा हुन सक्छ । चाँडै गर्भवती हुन चाहनुहुन्छ भने ओभुलेसनलाई अवश्य ध्यानमा राखनुस । महिलाहरु शुक्राणु र अन्डाको मिलनबाट गर्भवती हुन्छन् । एक पटक गर्भासयबाट निस्केपछि २४ देखि ३६ घन्टासम्म अन्डा जिवित रहन्छ । त्यसैले यो समयमा सम्वन्ध राख्नु जरुरी छ ।
ओभुलेसन पीरियडका दौरानमा गर्भधारणका लागि हरेक रात यौनसम्वन्ध राख्ने गर्नुस । त्यो सम्भव भएन भने एक दिन बिराएर गर्नुस । यसो गर्दा शुक्राणु र अन्डाको मिलनको सम्भावना बढ्छ । आफ्नो महिनावारीको सही समय थाहा भएका महिलाहरुलाई ओभुलेसन टाइम पत्ता लगाउन र गर्भधारणको योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । तर, अनियमित मासिक धर्म हुने महिलाहरुका लागि यो कठिन हुन्छ । समयमा महिनावारी नहुने महिलाहरुले गर्भधारणको प्रयास गर्नुअघि आफ्नो अनियमित महिनावारीको उपचार गराउनुपर्छ ।
सन्तान जन्माउन तपाईंसँग अध्ययन वा वृत्तिविकाससम्बन्धी प्राथमिकता के छन् भन्ने कुरामा ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । विशेष गरेर सन्तान जन्माइसकेपछि उसको हेरचाहमा पर्याप्त समय र धन लगाउन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, राम्रोसँग सोचविचार गर्नुपर्छ ।
पुरुषले चरमसुख पाउने हाराहारीमा लिंगबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ जसलाई वीर्य भनिन्छ । यही वीर्यमै शुक्रकीट हुन्छन् । एकपल्ट वीर्य स्खलन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिलिलिटर वीर्य निस्कन्छ । वीर्यमा हुने शुक्रकीटको संख्या सधंै एकैनासको नहुन सक्छ । शुक्रकीटको संख्या ४ देखि १२ करोड प्रतिमिलिटरसम्म हुनुलाई सामान्य मानिन्छ ।
कुनै पुरुषले महिलाको योनिमा वीर्य स्खलन गरेपछि स्खलित वीर्य तथा योनि रस बिस्तारै बाहिर आउँछ, यो स्वाभाविक हो । महिलालाई त्यसले कुनै असजिलो सिर्जना गर्छ भने यौनसम्पर्कपछि कुनै कपडाले पुछ्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा, अन्डरवेयरभित्र लगाइने सानो स्यानिटरी प्याड लगाउन सकिन्छ । यदि वीर्य स्खलन योनिको भित्री भागमा भएको छ भने जति नै धेरै मात्रामा वीर्य बाहिर निस्किएजस्तो लागे पनि पर्याप्त शुक्रकीट पाठेघरको मुखसम्म पुग्छन् ।
सामान्यत यसरी वीर्य बाहिर निस्कँदा गर्भधारण नहुने होइन । यसले त पर्याप्त मात्रामा वीर्य स्खलन भएको कुरालाई संकेत गर्छ । त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक चिन्ता गर्नु पर्दैन । गर्भको सुरुवात पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित डिम्बको मिलनबाट हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रूपमा १. डिम्ब निष्कासन, २. यौनसम्पर्क, ३. वीर्य स्खलन, ४. डिम्ब निषेचन तथा ५. डिम्ब रोपणजस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्य स्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बमा ती असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ । यसरी शुक्रकीट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज भनिन्छ र यही नै पछि विकसित भएर शिशु बन्छ ।
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमै गर्भ रहन्छ, तर सधैं त्यस्तो हुँदैन । गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुनुपर्छ । शुक्रकिटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको समय हुन जरुरी छ ।
महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएकी महिलाको १४ औं दिन तिर डिम्ब निस्कने भएकाले उक्त समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहने संभावना एकदम धेरै हुन्छ ।
शुक्रकीट डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन् अङ्गभित्र ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ त्यसैले डिम्ब निस्कने केही अघिको र केही दिन पछिको समय लाई गर्भधारणको दृष्टिकोणले असुरक्षित समय मानिन्छ । सामान्यतया महिनावारी सुरु भएको आठौं दिनमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भरहने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
नियमित यौनसम्पर्क गर्दा एक सामान्य दम्पतीको महिनामा यस्तै १५ देखि २५ प्रतिशत गर्भ रहने सम्भावना हुन्छ । चार–पाँच महिनामा यो यस्तै ५० प्रतिशत अनि एक वर्षमा करिब ८० प्रतिशत पुग्छ ।
यद्यपि महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभै ढिलो–चाँडो हुन्छ भने केही सोच्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो भरपर्दो नहुन सक्छ । गर्भ निरोधको कुनै साधन प्रयोग नगरी एक वर्षसम्म नियमित रूपमा यौनसम्पर्क गर्दा पनि गर्भ रहेन भने कतै केही खराबी छ कि भनेर खोजतलास गर्न परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
माथि भनिएझैं योनिबाट वीर्य बाहिर निस्कनु सामान्य नै भएकाले कुनै विशेष यौन आसन अपनाउनु पर्दैन । तपाईं माथितिर बसेर गर्दा होस् वा तपाईंका श्रीमान्, राम्रोसँग वीर्य स्खलन भए शुक्रकीट पाठेघर हुँदै डिम्बवाहिनी नलीसम्म पुग्न सक्छ । कति पटक यौनसम्पर्क गर्ने भन्ने कुरा त तपाईंको इच्छामा भर पर्ने कुरा हो ।
महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ। किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ । नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ।
पुस १ लाई किन मानिन्छ कालो दिन ?
खानेपानी अभावले हिउँ पगालेर पिउँदै स्थानीयबासी
कति तापक्रमसम्म बाँच्छ कोरोना ? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए नयाँ तथ्य
६ बैशाख २०७७, शनिबार ०८:४१ April 18, 2020 Naya Kuro
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर, गतवर्षभन्दा ६ स्थान तल खुम्चियो
१० बैशाख २०७७, बुधबार १६:५९ April 22, 2020 Naya Kuro
वल्र्डलिंकले निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १७:२० March 11, 2019 Naya Kuro